Apple inoburitsa yechipiri beta vhezheni yewatchOS 6.1 yevagadziri | Ndinobva mac
Apple inoburitsa yechipiri beta vhezheni yewatchOS 6.1 yevagadziri
Chimwe chinhu chiri kuitika neshanduro dzemhando dzakasiyana dzeApple dzinoshanda uye izvo ndezvekuti isu tiri kutarisana nefungu reshanduro inotangisa iyo isingawanzo kuzivikanwa. Mune ino kesi haisi yekupedzisira vhezheni yevashandisi vese, iri watchOS 6.1 beta yevanogadzira.
Pamwe neiyi vhezheni Apple yakatanga iyo beta vhezheni yeIOS 13.2 saka isu tine chokwadi chekuti shanduro dzatave kuisa dzichagara pane zvishoma kana zvinoita sekunge. KuApple havasvetuki pamhando uye kunyangwe chiri chokwadi isu takamirira yedu yekuvandudza macOS, isu tinoteerera nhau dzedzimwe vhezheni padivi uye mune iyi nyaya zviri kune vanogadzira.
Pasina kupokana, vhiki iri kuzadzikiswa maererano neshanduro nyowani uye ndizvo isu tave nemazuva gumi nesere neshanduro dzekupedzisira nyowani Zvese zviri zviviri zvishandiso zveIOS uye Apple Watch, ine watchOS. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti aya haana kunyatso shandurwa vhezheni kune izvo zvinowanzo buritswa neApple, asi iri kuvhura maficha manyowani anotarisana nekuchengetedzeka uye kugadzikana.
Mune ino kesi, iyo nyowani vhezheni yewatchOS 6.1 yevagadziri yatovepo uye zvinotarisirwa kuti iyi vhezheni inotora nguva yakati rebei kuti isunungurwe zviri pamutemo. Semazuva ese mune beta vhezheni dzeWOSOS, zvakanaka kuti ugare kure kana usiri mugadziri, nekuti hapana kudzokera kumashure kana mabugs kana matambudziko neshanduro yacho. Ndinovimba iyo matambudziko akaonekwa sekushandisa bhatiri ita zvirinani neshanduro idzi dzinosvika mumavhiki anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa yechipiri beta vhezheni yewatchOS 6.1 yevagadziri
Mutsva makuhwa nezve inogona Apple Keynote muna Gumiguru